Imveliso yesixhobo seZonyango, abaNikezeli-abaThengi besixhobo seZonyango iChina
Lithium Polymer ibhetri
I-Lithium ion Ibhetri Pack
Ibhetri eyenziwe ngokwezifiso
Ibhetri yesiXhobo samandla
Uhlobo lweCylindrical Battery
Uhlobo lwe-Prismatic Battery
Inkqubo yoLawulo loMgangatho
Umzi mveliso wethu
I-103450 1800mAh-Smart imaski
Umgangatho ophakamileyo ubekwe ngendlela eyi-18650-4s 14.8v 3400mAh Recha ...
Amaxabiso emizi-mveliso UL avunyiweyo angama-22.2v 900mah uhlaziyo ...
CPAP ibhetri smart umboniso amandla ukwakha recha ...
Ukuthengisa okutshisayo 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ion r ...
Umzi-mveliso webhetri uthengise ngqo i-5000mah 3.7v li-ion 2 ...
I-CPAP ibhetri ebonakalayo enamandla ombane ayakha ibhetri yeLithium 7.2V 13.6Ah
Sinikezela ngebhetri ye-CPAP enobuchule bokubonisa amandla ekwakheni ibhetri yeLithium 7.2V 13.6Ah.Ipakethi yebhetri ingasetyenziselwa i-CPAP, i-ventilator, umatshini wokuphefumla, ibhethri elitshintshayo okanye ezinye usetyenziso ezifanelekileyo.Ummall BMS owakhiwe ngaphakathi, Unxibelelwano lwe-I2C, ibhetri inamandla okubonisa.I-cell 18650 yebhetri yeeseli ubude bomjikelo wobomi.Ibattery inokuvunywa i-ROHS, UL, CE, CB, UN38.3, MSDS, IEC62133, isiqinisekiso se-KC njengemfuno yabathengi.PLM Ibhetri ye-lithium enokuphinda isebenze kwakhona enamava eminyaka emininzi.Siyamkela i-OEM / ODM iodolo evela kuwo onke amazwe aphesheya.Oku ikakhulu kubathengi abavela eYurophu, e-Asia, Korea, eMelika, eJapan, eCanada, njalo njalo. Nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi xa ufuna ibhetri.
Ixabiso le-Factory ul evunyiweyo 22.2v isixhobo sohlalutyo lwe-900mah X-ray pack pack
Sibonelela ngexabiso leFactory UL evunyiweyo 22.2v ye-900mah isixhobo sokuhlalutya i-X-ray yebhegi yokupakisha.Ipakethi yebhetri ingasetyenziselwa i-X-ray, i-Wireless Drill, isixhobo sohlalutyo, umpu weMassage okanye ezinye iinkqubo ezifanelekileyo.Small ubukhulu ngomthamo wangempela.Protection board yakhiwe ngaphakathi ukugcina ibhetri ubomi obude kunye nokukhuseleka.Ibhayides, ibhetri evunyiweyo i-UL, i-CB, IEC62133, i-PSE, i-KC, i-UN38.3, i-MSDS, isatifikethi se-RCM njengeemfuno zabathengi. Sivelisa iibhetri ze-lithium ezinokuphinda zisebenze, ngakumbi ipakethi ethambileyo enamandla amakhulu kunye iiseli zokhuselo, ibhetri egobile kunye neepakethe, kunye nebhetri yokuqala ekhulileyo, enje ngeLithium thionyl chloride, Lithium Manganese. Siphinde sazenzela iipakethe zebhetri, indawo yokugcina ibhetri.Our ikakhulu umthengi ovela eYurophu, eAsia, Korea, Melika, Japan, Canada njl Nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi xa ufuna ibhetri.
I-24V yoqobo ye-13.5Ah ye-Li-ion enokutshaja ibhetri ye-Neonatal Incubator ye-OEM kunye ne-ODME
Sinikezela ngebhetri yentsusa ye-24V 13.5Ah Li-ion Ehlaziyiweyo ye-Neonatal Incubator OEM kunye ne-ODME .Ipakethi yebhetri ingasetyenziselwa i-Neonatal Incubator, eyenzelwe ngokwezifiso njlnjalo. Inkampani yePMM ineqela elongamileyo lomgangatho wokubeka iliso, inkqubo egqibeleleyo yokuvavanya kunye egqibeleleyo, inkqubo, inkqubo ukuhamba kobunzululwazi. Ukusuka kwizinto ezingenayo zebhetri, imveliso, ukuthunyelwa, inkonzo kunye nolunye ulawulo olungqongqo, kulandela i-ISO9001: Inkqubo ye-2000 yokubalula iimfuno, inkqubo yemveliso. Kwaye yadlula i-ISO9001: 2000, CE, ISO14001: 2004, RoHS, UL kunye nezinye izatifikethi.Naye umthengi wethu osuka eYurophu, Asia, Korea, Melika, Japan, Canada, Canada, njl. Sicela ukhululeke ukunxibelelana nathi xa ufuna ibhetri. .
Umzimveliso we-PLM 6Ah 18650 4S PCB Protect 14.8V Li-ion Ibhetri egcwalisekayo
Sikwimveliso ye-PLM 6Ah 18650 4S ekhuselweyo i-PCB 14.8V Li-ion Ibhetri engenakukwazi ukuphinda isebenze.Ipakethi yebhetri ingasetyenziswa kwi-Monitor, ukuhanjiswa kwamandla, impompo yokufaka, isitshixo sempazamo se-Ultrasonic, Umgangatho owamkelekileyo osetyenzisiweyo njl.njl. Iipakethi zebhetri kunye nomthengi wethu ikakhulu ovela eYurophu, eAsia, Korea, eMelika, eJapan, eCanada njl njl Nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi xa ufuna ibhetri.
Umzimveliso we-PLM 2200mAh 18650 eyakhelwe ngaphakathi kwi-PCB ekhuselweyo 3.7V Li-ion Lithium 1S Ibhetri egcwalisekayo
Sibonelela ngefektri ye-PLM 2200mAh 18650 eyakhelwe ngaphakathi kwi-PCB ekhuselweyo 3.7V Li-ion Lithium 1S Ibhetri egcwalisekayo.Ipakethi yebhetri ingasetyenziswa kwi-Endoscope, Mini Fan, Flashlight, Torch, Toys njl. simahla ukuba sazise iinkcukacha zakho zesicelo kunye nesicelo.
Ifowuni: + 86-755 36631197
Kumgangatho 5, kwiSakhiwo 6, Dongfanghong Park Park, Yushi Road, guanlan, Long Hua, 518109 Shenzhen China
Cofa ungene ukukhangela okanye i-ESC yokuvala